एमभी दुगड ग्रुपका भाईस चेयरम्यान युवा उद्यमी विवेक दुगडले एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले पब्लिक र प्राइभेट दुबै खालका कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छन् । उनी हाल गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा...
सरकारले थप साढे २ प्रतिशत कर लगाएको छ, हकप्रद र बोनस सेयरमा कर लाग्ने विषयमा पनि विवाद भयो । यसले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु भएको छ ? अहिले सरकारले संस्थागतलाई बढी जोड...
स्कुलको शिक्षक, प्रधानध्यापक, आएल्स प्रशिक्षक हुँदै आज सफल परमर्शदाता हुन् नवराज के सी । उनीसंग यो क्षेत्रमा १२ वर्षको अनुभव छ । ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्था हाकिरहेका केसीले धेरै विद्यार्थीहरुको बैदेशिक शिक्षाको सपना पुरा...
गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुरा भएको छ । २०६४ चैत १८ गते बीमा समितिबाट सञ्चालन अनुमति पाएको यस कम्पनीले २०६५ जेठ १७ गतेबाट सेवा शुभारम्भ गरेको थियो । नयाँ जीवन...
सोल्टी होटलमा आयोजित एक रात्रीभोजमा उद्यमी किरणकुमार शाखःले आफ्नो ८९ वर्षिय बुबाको सक्रियता, निर्णय क्षमता, स्मरणशक्तिको चर्चा गर्दै अझै बुबाको सहमति नलिई अफिसका कुनै पनि निर्णय नहुने कुरा सुनाउँदै थिए । त्यसपछि हामीले गणेशभक्त...
पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरु जापनिज भाषाप्रति आकर्षित भएका देखिन्छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु स्वदेशमै उच्च शिक्षा लिने सुविधा हुँदाहुँदै किन जापनिज भाषा सिक्न जापान जान लालायित देखिन्छन् । जापान गएर विद्यार्थी के गर्छन् ? उनीहरुले...
नेपाली युवाहरु स्वदेशमा अध्ययनको अभाव देखाउँदै विदेशिने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सम्भावनाको प्रयोग हुन नसक्दा युवा वर्ग अध्ययनका लागि विदेशिन बाध्य छन् । विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न पढाउने मध्यको एक...
अनुपमा खुञ्जेली वाणिज्य बैंकमा पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएकी छिन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा महिला पनि सीईओ हुन सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्न उनी सफल भएकी छिन् । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, नविल बैंक हुँदै...
विश्वमा ३० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको खुला विश्वविद्यालय नेपालमा गत वर्षदेखि शुरू हुँदै छ । यो वर्षदेखि विभिन्न संकायमा स्नातकोत्तरदेखि एमफीलसम्मको अध्ययन शुरू भएको छ । विश्वविद्यालयले नयाँ विषय अध्यापन शुरू गरेको छ, जुन कुरा...
लोडसेडिङको अन्त्य, स्थीर सरकारको संकेत, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग सबैतिरबाट आएको छ । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा विकसित भएको बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात...
संगम स्वीटसका सञ्चालक संगम शर्माले शाकाहारी होटल खोल्छु भन्दा उनी हाँसोको पात्र बनेका थिए । सोही हाँसोलाई इखको रुपमा बदलेर उनले झापाको दमकमा संगम स्वीट सञ्चालनमा ल्याए । संगम स्वीट चल्छ भनेर सुरुमा कसैले...
विद्यार्थीको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने शिक्षामा जोड दिएका छौं-मनोजकुमार थापा मगर
२०७४ चैत २९ गते १२:०६ विकासन्युज
आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारमा जन्मनु भएका मनोजकुमार थापा मगर प्रिप्राइमरी स्कूल पढ्दै गर्दा उहाँको आमा बित्नुभयो । त्यो अवस्थामा कहिले मामाघरमा बसेर, कहिले घरमा बसेर स्कूल तहको अध्ययन गर्नु भएका थापाको कलेज जीवन पनि...
कुनै बेला सरकारी स्कूलमा मावि तहको स्थायी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो तेजुलाल चौधरी । जब उहाँलाई इच्छा विपारित विकट स्थानमा जबरजस्ती सरुवा गरियो, तब उहाँले जागिरै छाडेर नयाँ बाटो लिनुभयो । नयाँ भाग्यरेखा त्यहिबाट कोरियो ।...
« अघिल्ला 1 …56789… 17 पछिल्ला »